Umthetho Wezintela eNetherlands | Law & More
Intela eNetherlands ithinta wonke umuntu ohlala noma ophatha iNetherlands. Womabili la mazwe aseNetherlands nawaseYurophu (i-EU) wonke anezinhlelo eziyinkimbinkimbi zokukhokha intela ezinemithetho enzima nezivumelwano zamazwe omhlaba. Uhlelo lwentela lwaseDashi, ngokwesibonelo, lwazi izinhlobo eziningi zemithetho nezintela ezifana nentela engenayo, intela yemiholo, intela engenayo nentela yenhlangano. Ngaphezu kwalokho zonke lezi zinhlelo, izimiso nezivumelwano ezishiwo ngaphambilini zingaba nomthelela ohlelweni lwentela lwaseDashi.
UKUHLELWA KOMHLANGANO WAMAZWE NOKUKHAYA KWAZWE
Intela eNetherlands ithinta wonke umuntu ohlala noma ophatha iNetherlands.
Womabili la mazwe aseNetherlands nawaseYurophu (i-EU) wonke anezinhlelo eziyinkimbinkimbi zokukhokha intela ezinemithetho enzima nezivumelwano zamazwe omhlaba. Uhlelo lwentela lwaseDashi, ngokwesibonelo, lwazi izinhlobo eziningi zemithetho nezintela ezifana nentela engenayo, intela yemiholo, intela engenayo nentela yenhlangano. Ngaphezu kwalokho zonke lezi zinhlelo, izimiso nezivumelwano ezishiwo ngaphambilini zingaba nomthelela ohlelweni lwentela lwaseDashi.
Ngaphambi kokuqala ibhizinisi eNetherlands wonke usomabhizinisi kufanele alulekwe ngezici zentela yaseDashi nezintela zentela zaseDashi. Kungumsebenzi wokusebenzisa ngokuphelele imithethonqubo yentela ukukhawulela ingcindezi yentela yamaDashi.
Yini ongayenza Law & More ukwenza ukukusiza?
Law & More abeluleki bezentela basiza ukuthuthukisa isakhiwo esifanelekile senkampani ukujabulela ngokugcwele izinzuzo zentela yaseDashi. INetherlands ihlinzeka ngemibuso ethinta izivumelwano zentela ezinkampanini zamazwe amaningi ngezinkampani zakwamanye amazwe. Ukufakwa esikhundleni kwamanye amazwe kungaholela ezinzuzweni zentela. Intela ephindwe kabili ingakhawulelwa ngenxa yezivumelwano eziningi zentela iNetherlands engena kuzo. Futhi izintela zokungenisa amaDashi zingavinjelwa ezimweni eziningi.
Law & More, ngokubambisana nabeluleki bayo bezentela kanye namakhasimende ayo, ubheka izinketho ezinikezwa yimithetho yentela yamaDashi ne-EU. Uma kunesidingo, sizosebenzisana nabeluleki abathembekile bezentela kanye nababhali bama akhawunti ababhalisile eNetherlands nakwamanye amazwe ukunikeza izeluleko nesixazululo esingcono kakhulu kumakhasimende ethu aseDashi nakwamanye amazwe.